Indasitiri Yemishonga - Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd.
Lead Fluid Peristaltic pombi ipombi yechina yepombi, inyanzvi peristaltic pombi inogadzira muChina.Inonyanya kubatanidzwa mukutsvagisa nekusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwepombi dzeperistaltic, pombi dzesirinji, pombi dzegiya dzakanyatso uye mamwe mapombi ekufambisa emvura uye nezvimwe zvine hukama, uye inoita dhizaini nekutengesa kweakasiyana akangwara fluid control system.Retrofit uye tekinoroji kubvunza.
Kubva pakuvambwa kwayo kusvika parizvino, Lead Fluid yagara yakanamatira kune iyo pfungwa yekuvandudza, kuomarara, kutendeseka, kushanda pamwe, uye mutengi kutanga.Ichivimba neyayo indasitiri kumashure uye hunyanzvi hwakanakira, yakaramba ichigadzira nhevedzano yezvigadzirwa zvepasi rose, ichihwina kuvimba uye kukoshesa kwevatengi.
Tsvagiridzo yemishonga, kusimudzira uye maitiro ekugadzira anoda sterility, kuparadzaniswa kwemvura uye zero kusvibiswa kunogona kuvimbisa mwero wepamusoro wekuita uye kuchengetedzwa kwechigadzirwa muindasitiri yemishonga.
Sterile fluid kuyerera kwakakosha mumashandisirwo ekurapa, ndosaka Lead Fluid peristaltic pombi akakodzera zvakanyanya kune aya anodiwa maitiro.
Nekubuda kwedenda muna 2020, biosecurity yave nzira yakakosha yenyika.Isu tinofanirwa kunge takagadzirira zvakakwana kugamuchira dhijitari, inetiweki, uye nehungwaru kusimudzira kusimudzira uye shanduko yemaindasitiri.
Lead Fluid peristaltic pumps inopa yakanyatsovharwa sisitimu yekusvibisa-isina aseptic/sterile flow control.Sterility, fluid isolation, zero contamination.
BT103S Yekumhanya-inoshanduka peristaltic pombi
1. High-precision stepper motor, speed accuracy error <± 0.2%, speed range 0.1-100rpm, yakavharwa loop control.
2. Tsigira WIFI yekubatanidza uye mobile APP remote control.
3. Yakasimba inopesana nekupindira, kudzivirira kwakasimba, kunonoka kumira, kusveta shure basa, kiyi yekuvhara basa, yakavharwa rotor alarm, liquid leakage alarm (optional).
4. Tsigira 5 ~ 24V yakafara voltage yekunze control input, RS485 kutaurirana, inoenderana neMODBUS protocol.
BT600F-V3 inoparadzira yakangwara peristaltic pombi
1. 4.3-inch super HD LCD touch screen kuratidza uye kushanda.
2. Kuyerera kwemodhi, vhoriyamu vhoriyamu kugovera, kugovera nguva, kutenderera kugovera (kuronga) akawanda ekugovera modes inosarudzika.
3. Tsigira WIFI yekubatanidza, mobile APP iri kure kushanda, uye ine mabasa ekutarisa akadai sekuvhara alarm uye chiyeuchidzo kutsiva pombi yepombi.
4. Iine mabasa ekudzoreredza kutungamira, kutanga-kumira, kuzere kumhanya, kuyamwa kumashure, uye nguva yekutanga-kumira.
WSP microliter peristaltic pombi
Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd. inotarisa pakugadzira, kusimudzira, kugadzira uye kushambadzira kwepombi dzeperistaltic nemapombi sirinji, uye yakazvipira kupa vashandisi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi akakwana ehunyanzvi.Pamusoro pekuve neakanyanya akazara akatevedzana emapombi eperistaltic uye sirinji pombi yechigadzirwa mitsara, Lead Fluid inogona zvakare kupa OEM akagadziridzwa masevhisi zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.Lead Fluid's yekukura chigadzirwa chiitiko chinogona kukupa iwe nekukurumidza application gwara uye mazano emapombi eperistaltic nemapombi sirinji, uye kupa vashandisi yemhando yepamusoro, yepamusoro-chaiyo, uye inodhura-inoshanda kuendesa mvura.